Mourinho Oo Ka Deyriyey Xaaladda Ee Fabregas Oo Laga Yaabo In Uu Caawa Maqnaado
HomeChampions LeagueMourinho Oo Ka Deyriyey Xaaladda Ee Fabregas Oo Laga Yaabo In Uu Caawa Maqnaado
17/02/2015 Abdiwahab Ahmed
Laacibka khadka dhexe ee Chelsea ayaa xanuunsanaya isla markaana uu shaki ku jiraa in uu safan doono kulanka caawa ay kooxdiisu la ciyaari doonto PSG.
Laacibkan khadka dhexe oo dhowaan ka soo laabtay dhaawac muruqa ka gaadhay kulankii Semi Finalka league Cup ee Liverpool, ayaa ciyaaray 20 daqiiqo ciyaartii toddobaadkii hore dhex martay Chelsea iyo Everton.
Sida uu xaqiijiyey tababare Jose Mourinho laacibkan reer Spain ee 27 jirka ah ayaa waxa ku dhacay duray ama hargab, waxaana loo badinayaa in uu safan waayo kulanka caawa.
Mourinho oo warbaahinta la hadlay ayaa yidhi: “Mushkilad yar oo kaliya yaa na haysata taas oo ah in aanu qof kastaaba si buuxda u caafimaad qabin. Oscar xanuun ayuu dareemayaa, Fabregas wuu xanuunsanayaa, Willian wali wuxuu dareemayaa dhaawac ka soo gaadhay kulankii Liverpool, laakiin qof waliba waxa uu doonayaa in uu isku dayo, waxaanan kaliya idin odhanayaa Mikel ayuun baa gebi ahaanba naga maqan”.
Tababare Jose Mourinho waxa uu sheegay in marka kooxdiisa uu u ciyaarayo Fabregas iyo marka uu ka maqan yahay ay kala duwan tahay, waxaanu yidhi: “Koox ka duwan ayaanu nahay marka aanu haysano Fabregas. Ma odhanayo waanu ka fiicanahay iyo waanu ka xunnahay toona, laakiin laba kooxood oo kala duwan ayaanu nahay. Kooxdu xagaagii ayay la kortay Fabregas qaab ciyaareedkiisuna wuxuu beddelay ciyaartii kooxda oo dhan.
“Marka uu naga maqan yahay, maamulka ayaa naga luma, haysashadaa lunta, waxa aanu la mid noqonaa uun kooxda naga soo horjeeda, abaabulan oo si fiican isu-bedesha. Laakiin marka uu nala joogo, ciyaarta si fiican ayaanu u maamulnaa, anaga ayaa ku gacan sarrayna garoonka, kubadda ayaanu haysanaa sababtoo ah qaab ciyaareedkiisa dabiiciga ah ee uu leeyahay”. Ayuu yidhi Mourinho.
Monaco 0-3 PSG: Cavani Oo Daad Ku Noqday Shabaqa Monaco
Waraysi Xiiso Badan: “Ciyaartoyga Reer Masar Uma Sahlanaya Inay Qaaradda Yurub Ka Ciyaaraan” – Q-2aad Ee Waraysigii Mohamed Salah
09/02/2018 Abdiwahab Ahmed
Portugal Vs USA 1-1 – All Goals & Highlights
14/11/2017 Diiriye Ahmed